Mareykanka oo fariin u diray Farmaajo, Deni iyo Axmed Madoobe | KEYDMEDIA ONLINE
Tani waxay qeyb ka tahay cadaadiska Beesha Caalamka uu ku saarayo Madaxa Siyaasadda Soomaaliya inay heshiis ka gaaraan khilaafka u dhaxeeya ee dhanka doorashadda.
MUQDISHO, Soomalaiya - Safaaradda Mareykanka ayaa maalmahan soo saareysa qoraallo canaan iyo cagajuglayn xambaarsan oo ay u dirayso Madaxda Soomaaliya ee isku khilaafsan hanaanka doorashadda.
Qoraal Maanta kasoo baxay oo noqonaya kii labaada mudo labo maalin gudahooda ayaa fariin kale loogu diray Farmaajo iyo Madaxda Maamul Goboleedyada dalka, ee ku sugan Muqdisho.
Safaaradda ayaa ugu baaqday Farmaajo inuu xaqiijiyo in Shirka Afisyooni uu ka furay shalay uu noqdo mid loo dhan yahay, iyadoo Madaxda Maamullada shanta ah dhamaantooda lagu amray inay si shuruud la'aan ah uga qeybgalaan.
Maalin kahor, March 21, waxay Safaaradda sheegtay inaan la aqbali doonin fashil kale oo ku yimaada wadahadallada, waxayna ku amartay hogaamiyeyaasha Maamul Goboleedyada inaysan Muqdisho ka bixin inta heshiis wadar ogol ah laga gaarayo.
Waxaa muuqata in hadallada Mareykanka iyo baaqyada Beesha Caalamka aan waxba ka bedelin mowqifka Axmed Madoobe iyo Deni ee ku aadan shirka Afisyooni, iyagoo sheegay inaysan ka qyebgali doonin inta laga fulinayo dalabkooda ah in Farmaajo wareejiyo talada dalka iyo maamulka doorashadda.
Axmed Madoobe iyo Deni waxay degan yihiin Airport hotel, oo dhowr tallaabo u jira Safaaradda Mareykanka halkaasoo ay ka wadaan dhaq-dhaqaaqyo siyaasadeed iyo kulamo ay la yeelanayaan Musharixiinta Mucaaradka.